Iphrojekthi yokwandiswa kweport eLatin America isebenzisa ama-Ellicott Dredges amabili
Ama-Ellicott amabili umsiki we-cutter suction ziyasetshenziswa njengamanje ekunwetshisweni kwechweba elikhulu eLatin America. Lokhu kuyingxenye yephrojekthi yokwandisa umthamo wokuphatha iziqukathi ethekwini nokuhlalisa imikhumbi yePost-Panamax. I-Ellicott dredge yokuqala, i-Series 370 enepompo ye-12 ″ x 10 ″ (300 x 250 mm) kanye ne-440 HP (328 kW) yamandla afakiwe esewonke, ibisebenza kuleli chweba isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziyisithupha. Le dredge engu-370 isanda kujoyinwa yi-Series 670 dredge, nepompo eyi-14 ″ x14 ″ (350 x 350 mm) kanye ne-800 HP (597 kW) yamandla aphelele. U-Ellicott usanda kukwazi ukubamba okubhalwe phansi emoyeni kwe-670 Dragon dredge esizeni sephrojekthi. Yomibili le mijondolo njengamanje isasebenza ekuqiniseni indawo engenangqondo ye-ukuphela entsha.
I-370 ne-670 ziyizindawo ezithandekayo, kepha futhi zinamathebhu futhi zithembekile - zilungele zonke izinhlobo zezicelo zokudonswa ngomshini kubandakanya ukubuyiselwa kwezibuko. Yizihlahla ezinamandla kakhulu kuleli banga lesayizi.
Ngokwesiko, amaphrojekthi wokunweba echwebeni afana nalawa aphathwa kusetshenziswa amakhulu ama-trailing suction hopper dredger (TSHD) noma eminye imikhumbi yokuzikhulula eyenzelwe yona. Ezimweni ezithile, ama-duitter amancane we-cutter suction ayisixazululo esingcono ngenxa yokutholakala kwawo, ukutholakala, ukukhiqizwa okuphezulu kanye nezindleko eziphansi. Lezi zinzuzo ze-portable cutter suction dredge nazo ziyasebenza ekuvuseleleni kabusha kokulungiswa kwembobobobo, ikakhulukazi uma ukwenziwa dredging kumele kwenziwe njalo.
Buka ukwengezwa kwe-Drone okungeziwe kwe- I-Ellicott 1870 Dragon dredge kwethulwa ngomunye umsebenzi eSouth America.
Qala Iphrojekthi Yakho Yokudonsa Ngengxenye Ellicott